टन्सिल भएको छ ? नआत्तिनुहोस् यस्तो छ घरेलु उपचार « गोर्खा आवाज
टनसिल एक धेरै साधारण समस्या हो। मौसममा परिवर्तनको कारण, यो समस्या कसैलाई पनि हुन्छ। टन्सिल गलासँग सम्बन्धित एक रोग हो। यस बिमारीमा घाँटीमा तीव्र दुखाइ हुन्छ। यसैले टन्सिलको उचित उपचार धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
मौसमको लगातार परिवर्तनको कारण, चिसो, निमोनिया र ज्वरो हुन्छ। यो टन्सिलबाटनै सुरु हुन्छ। यदि तपाईं यो रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ भने, आउनुहोस् हामीलाई केहि सजिलो गृह उपचारहरू थाहा छ जसले तपाईंलाई टन्सिलबाट राहत दिन्छ।
टन्सिलको मुख्य लक्षण: घाँटीमा असजिलो हुने, ज्वराे र जाडाे लाग्ने, निल्दा कष्ट, सामान्य कमजोरी, टाउकाे दुख्ने, सास गनाउनु, बङ्गराकाे तल दुख्नु, आदि हुन् ।
टन्सिलकाे घरेलु उपचार हाे कागती र मह
कागती टन्सिलकाे घरेलु उपचारमा धेरै फाइदाजनक हुन्छ । मनताताे पानीमा कागती निचाेरेर र मह मिसाएर कुल्ला गर्नुहाेस् ।
टन्सिलकाे घरेलु उपचार बेसार र दूध
एक चिम्टी बेसार पाउडरमा उमालेकाे ताताे दूध मिसाएर रातीमा सुत्न भन्दा पहिले यसकाे सेवन गर्नुपर्छ । याे धेरै असरदार हुन्छ ।
टन्सिलकाे लागि नुन फाइदाजनक
उमालेकाे पानीमा नुन मिलाएर त्यसले कुल्ला गर्नुहाेस् । यसले तपाईंलाई धेरै छिटाे आराम पाइन्छ ।
टन्सिलबाट छुटकारा पाउन गाजरकाे जुस
टन्सिलबाट छुटकारा पाउनकाे लागि गाजरकाे जुस सेवन गरे छिट्टै अाराम पाइन्छ ।
मेथीकाे पाउनुस टन्सिलबाट छुटकारा
3 सानाे चम्चा मेथी एक लिटर पानीमा ताताे गर्नुहाेस् । याे पानीले दिनमा तीन पटकसम्म कुल्ला गर्नुहाेस् । याे समस्याकाे समाधानकालागि याे एकदम सरल तरिका हाे ।
अंजीरले टन्सिलकाे उपचार गर्नुहाेस्
अंजीरलाई पानीमा उमालेर पेष्ट बनाउनुहाेस् । याे पेष्टेलाई घाँटीमा लगाउनुहाेस् । यसले घाँटीमा हुने पिडाबाट अाराम दिन्छ ।
टन्सिलको लागि चुकन्दर जुस
चुकन्दरकाे जुस घाँटीकाे पिडाकाे लागि धेरै प्रभावकारी हुन्छ । यदि तपाईं टन्सिल देखि चिन्तित हुनुहुन्छ भने तपाइँले चुकन्दरकाे जुस सेवन गर्ने सुरु गर्नुहाेस् ।
काँक्राेले गर्नुहाेस् टन्सिलको उपचार
काँक्राेमा चुकन्दर जस्तै विषालु तत्वलाई शरीरबाट बाहिर निकाल्ने गुण हुन्छन् । याे टन्सिलको लागि धेरै प्रभावकारी घरेलु उपचार हाे । तपाईं यसकाे जुस बनाएर सजिलै सेवन गर्न सक्नुहुन्छ । सेवन गरेर यसकाे फाइदा अाफैले हेर्नुहोस् ।
टन्सिलको उपचार गर्नुहाेस् फिटकिरीले
फिटकिरीकाे मसिनाे टुक्रा बनाएर पानीमा उमाल्नुहाेस् । त्याे पानीले कुल्ला गर्नुहाेस्, धेरै अाराम पाइन्छ ।
टन्सिलमा के नगर्ने ?
– सफाई र राम्रो स्वास्थ्य एक-अर्कासँग जोडिएको छ। त्यसोभए यदि तपाई राम्रो सफाई गर्नुहुन्छ भने कुनै रोगले तपाईंलाई छुन सक्दैन । बाथरूममा गएपछि पछि, खानेकुरा खानु अघि र हाच्छिउँ गरेपछि र केहि फाेहाेर चलाए पछि हात धुन नबिर्सनुहोस्। रुघा खाेकी भएकाे व्यक्तिबाट परै रहनुहाेस् ।
– चिसो पानीले संक्रमणको खतरा धेरै हुन जान्छ । यस कारणले टन्सिल नहुनेकाे लागि वर्षा माैसममा काेल्ड ड्रिंकहरू नलिनुहोस् । यदि तपाईं गर्मी महसुस गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईं लामो समयको लागि प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुन्न भने आफ्नो पसिना चाहिँ सुक्खन दिनुहाेस् र मात्र पेय पिउनुहोस्।
– यदि तपाईंसँग तंबाकू वा धूम्रपानको खराब बानी छ भने, कृपया यसलाई नगर्नुहोस्। अधिकांश टन्सिल हुनुको कारण तंबाकू हो। यसले गलालाई सुक्खा बनाउँछ, जसले संक्रमणको जोखिम बढाउँछ। त्यसैले धूम्रपान र तंबाकूकाे बानी छाेड्न नै राम्राे हुन्छ ।
– अमिलाे फलमा पाइने एसिडले तपाईंको घाँटीलाई थप क्षति पुर्याउन सक्छ। घाँटी खराब हुँदा तपाईले कागती, सुनताला, स्ट्राबेरी र नरिवल खानु हुँदैन। मानसूनमा विशेषतया फल फ्रिजबाट तुरुन्तै निकालेर खानु हुँदैन।
– टन्सिल हटाउन यो सबैभन्दा सामान्य र प्राकृतिक उपाय हो। हर्बल चिया पिए रोग गराउने जीवाणुहरू मर्ने गर्छन् । हर्बल चिया, दालचीनी चिया, ल्वाङ् र सुकुमेल-अलैँची हालेकाे चिया पिउने प्रयास गर्नुहोस्। यो शरीरको लागि पनि राम्रो हुन्छ र गलाको लागि पनि राम्रो हुन्छ ।